हेवीवेटलाई ‘हेवी’ चुनौती « प्रशासन
हेवीवेटलाई ‘हेवी’ चुनौती
नुवाकोट । नुवाकोटबाट पटक-पटक चुनाव जितेका उम्मेदवारलाई यस पटक चुनौति देखिएको छ । बाम गठबन्धन बनेकाले पहिलेको विरासत जोगाउन खासगरी कांग्रेस उम्मेदवारलाई कठिन देखिएको छ । ०५१, ०५६ ०६४ र ०७० साल गरी चार पटक नुवाकोटबाट सांसद् बनेका डा. रामशरण महत पहिलेभन्दा अहिले निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा बढी कसिनु परेको छ । नुवाकोट क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार डा. महत छ पटक अर्थ मन्त्री र एक पटक पराराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी समालीसकेका व्यक्ति हुन् ।
०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले एक स्थान र माओवादी दुई स्थानमा विजयी भएको थियो भने ०७० सालमा तीन वटै क्षेत्रमा कांग्रेसले जितेको थियो । नुवाकोटबाट ०७० सालको संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसले ४७ हजार दुई सय ६९, नेकपा एमाले १७ हजार आठ सय ३६ र माओवादीले २६ हजार नौ सय २९ मत प्राप्त गरेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
Tags : हेवीवेट